Lakandranon'i Panama - Wikipedia
Ny lakandranon'i Panamá dia lakandrano namboarin'ny olombelona, mampita ny andilan-tanin'i Panamá any Amerika Afovoany. Ny lakandranon'i Panamá dia lakandrano namboarina eo anelanelan'ny Ranomasimbe Pasifika sy ny Ranomasimbe Atlantika, ao Panamá no misy azy. Ny fanamboarana azy dia anisan'ny tetikasa ho an'ny injenieria anisan'ny sarotra indrindra natao. Ny vokany teo amin'ny varotra miampita ranomasina dia goavana be, satria tsy mila miampita ny lalana makany amin'ny Tanjona Horn intsony ny sambo; ny tanjona Horn dia tanjona any amin'ny farany atsimon'ny Amerika Atsimo. Ny sambo avy ao New York makany San Francisco noho ilay lakandrano, dia manao 9 500 kilometatra monja kanefa 22 500 kilometatra no tokony hataony rehefa tsy manaraka an'ilay lakandrano.
Ny fomba hanamboarana ny lakandranon'i Panamá dia efa noeritreretina tamin'ny taonjato faha-16, fa tamin'ny 1880 ilay lakandrano vao nanomboka namboarina, ambanin'ny fambosian'ny Fantsay. Rehefa tsy nahomby ny Frantsay dia, i Etazonia no namita ny lakandrano ary i G. W. Goethals no nitondra ilay tetikasa. Nisokatra tamin'ny 1914 ilay lakandrano. Ny fanamboarana ny 77 kilometatra amin'ilay lakandrano dia nisy olana isan-karazany: ny aretina, ny fihotsahan-tany ... Misy any amin'ny 27 500 tany ho any ny isan'ny olona matin'ny aretina sy matin'ny loza isan-karazany nandritra ny fanamboarana ilay lakandrano.
Hatry ny fanokafana azy tamin'ny 1914, betsaka ny tombontsoa azo amin'ilay lakandrano ary matetika andalovan'ny sambo mavesatra izy. Isan-taona, sambo 14 000 mahery no mandalo amin'io lakandrano io, ary 203 tapitrisa taonina ny tontalin'ny entana entin' ireo sambo ireo. Hatry ny fanokafana azy hatramin'ny taona 2002, sambo valo hetsy mahery no efa nandalo tamin'io lakandrano io. Ny asa momba ny fanitarana ilay lakandrano dia natomboka tamin'ny 2007 ary mety ho vita amin'ny 2014, mba ahafahan'ny sambo mavesatra handalo ao.
Fanoritana[hanova | hanova ny fango]
Ny lakandranon'i Panamá dia lakandrano eo anelanelan'ny Helodranon'i Panamá ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika, sy ny Ranomasina Karaiba, eo amin'ny Ranomasibe Atlantika. Ny endriky ny Andilan-tanin'i Panamá, mivilavila, dia mampikory ny lakandrano avy any avaratra andrefana makany atsimo atsinanana. Mba tsy hifangaro, ny fahefan'ny lakandrano dia nanasokajy ny fiampitana anaty sokajy roa : ny makany avaratra (Pasifika makany amin'i Atlantika) ary ny makany atsimo (Atlantika makany amin'i Pasifika).
Mpitari-tsambo makany avaratra
((en))((es)) Sehatry ny fahefan'ny lakandrano
((en)) Panama Canal History Museum
((fr)) Structurae : Lakandranon'i Panamá
((fr)) Canal de Panamá (Site du jour)
((en)) Canal Zone Brats, nombreuses informations sur le canal et la zone attenante.
((en)) Latin Business Chronicle Archived Mey 13, 2006 at the Wayback Machine — Contrôle chinois du canal ?
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakandranon%27i_Panama&oldid=1022078"
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 05:26 ity pejy ity.